Samaria ne Yuda atemmu (1-16)
Bɔne ne atuatew na ɛde ɔhaw no nyinaa bae (5)
1 Yuda ahemfo+ Yotam+ ne Ahas+ ne Hesekia+ bere so no, Yehowa asɛm baa Mika*+ a ofi Moreset nkyɛn. Onyaa anisoadehu a ɛfa Samaria ne Yerusalem ho sɛ: 2 “Aman nyinaa, muntie! Asaase ne nea ɛwom nyinaa, monyɛ aso,Na momma Awurade Tumfo Yehowa nni adanse ntia mo+Wɔ Yehowa asɔrefi kronkron mu hɔ. 3 Hwɛ! Yehowa fi ne tenabea reba;Obesian aba, na wabetiatia asaase so nkoko so. 4 Mmepɔw bɛnan wɔ ne nan ase,+Na abon* mu bɛpaapaeSɛnea ogya nan ɛwokyɛm no,Sɛnea nsu a wɔahwie agu baabi a ɛhɔ sian te no. 5 Yakob atuatew nti na eyinom nyinaa aba,Esiane Israel fi bɔne nti.+ Dɛn ne Yakob atuatew? Ɛnyɛ Samaria?+ Na dɛn ne Yuda nkoko?+ Ɛnyɛ Yerusalem? 6 Mɛma Samaria adan abo akuwakuw,*Baabi a wodua bobe;Mɛtow* n’abo agu bon mu,Na mɛma ne fapem ho ada hɔ. 7 Wobebubu n’ahoni nyinaa,+Na akyɛde a ɔde ne ho mae* a onyae no, wɔbɛhyew ne nyinaa wɔ ogya mu.+ Mɛsɛe n’abosom nyinaa. Ɔde tuutuusi sika na enyae,Na ɛbɛdan tuutuufo foforo akatua.” 8 Eyi nti, mesu na mabɔ bena;+Mede me nan besisi fam anantew, na mabɔ adagyaw.+ Mesu te sɛ sakraman,Na mabɔ bena te sɛ nsohori. 9 Efisɛ wɔrentumi nsa ne kuru,+Na aba ara abedu Yuda.+ Ne yare no atrɛw abedu me man kurow pon ano, abedu Yerusalem.+ 10 “Mommmɔ so wɔ Gat;Munnsu koraa. Mummunumunum mfuturu mu wɔ Bet-Afra.* 11 Mo a mote* Safir, momfa adagyaw ne aniwu mmɛsen. Wɔn a wɔte* Saanan de, wompuei. Wɔbɛbɔ bena wɔ Bet-Esel, na ɔrennyina w’akyi bio. 12 Efisɛ wɔn a wɔte* Marot no hwɛɛ biribi pa kwan,Nanso bɔne na esian fii Yehowa hɔ baa Yerusalem pon ano. 13 O, mo a mote* Lakis,+ momfa teaseɛnam nsã apɔnkɔ a wɔn ho yɛ hare no kɔn mu. Wo na woyɛ Sion babea bɔne mfiase,Na wo mu na wohuu Israel atuatew.+ 14 Enti wobɛma Moreset-Gat nkradi* akyɛde. Na Aksib afi+ ama Israel ahemfo nsa asi fam. 15 O, mo a mote* Maresa,+ mɛma obi abedi mo so nkonim.+ Israel anuonyam bɛkɔ ara akodu Adulam.+ 16 Wo mma a w’ani gye wɔn ho nti, bɔ tikwaw, werɛw wo ti ho nyinaa. Ma wo ti ho nyɛ kwabokwabo sɛ opete,*Efisɛ wɔatu wɔn ase afi wo nkyɛn kɔ obi man so.”+
^ Ɛyɛ edin Mikael anaa Mikaia a wɔatwa no tiaa. Ɛkyerɛ “Hena Na Ɔte Sɛ Yehowa?”
^ Anaa “abo akuwakuw wɔ wuram.”
^ Nt., “Mehwie.”
^ Anaa “ne tuutuusi akatua nyinaa.”
^ Anaa “Afra fi.”
^ Nt., “Ɔbea a wote.”
^ Anaa “ntetewmu.”